Wasiirka warfaafinta hidaha iyo dhaqanka dowlad goboleedka Hiiraan state Amb.Hoshow oo ka hadalay xaflad lagu soo dhaweynayey m/weynaha Puntland
Posted by admin on October 21 2011 12:01:28
HS:-Wasiirka warfaafinta hidaha iyo dhaqanka dowlad goboleedka Hiiraan state Amb.Hoshow oo ka hadalay xaflad lagu soo dhaweynayey m/weynaha Puntland magaalada London. Wararka Oct,21/2011
Hs:- Xaflad si heer sare ah loo soo agaasimay laguna soo dhaweynayey madaxweynaha dowlad goboledka Puntland oo ay soo qabanqaabiyeen jaaliyada Puntland ee dalka UK ayaa waxaa ka soo qeyb galay qeybaha kala duwan ee bulshada Somaliyeed ee ku dhaqan dalka UK gaar ahan magalada London iyo nawaaxigeeda.
Kulanka oo ay ka hadleen siyaasiyiin, aqoonyahano iyo waliba maamul goboleedka Hiiraan State oo halkaasi lagu casuumay masuuliyiintooda waxaana qudbad ka jeediyey madasha shirka wasiirka warfaafinta hidaha iyo dhaqanka HS Amb. A/qadir Abdulle Xoshow waxuna qudbadiisa ku bilaabay sidan.
Waxaa caawa farxad weyn noo wada ah inaan ka soo qayb galno munaasabaddan lagu soo dhoweynayo Madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud (Faroole). Maamul goboleedka Puntland wuxuu ka mid yahay maamullada Soomaaliyeed ee looga fadhiyo inuu qeybtiisa ka ciyaaro sidii Soomaaliya ay dib ula soo noqon lahayd sharaftii iyo karaamadii lagu yiqiinnay.
Waxaan qabaa in isu imaatinka ummadda Soomaaliyeed ee xafladaha noocaan oo kale ah wuxuu sameynayaa macna weyn oo ah in dib loo soo nooleeyo Soomaalinnimadii iyo wadajirkii ummadda, jidka loo marayo billowgeedana waa in hoosta laga soo billaabo.
Aniga oo caawa ka wakiil ah Hiiraan State… waxaan halkan rabaa inaan ka caddeeyo inaan diyaar u nahay inaan gacan ka geysanno sidii aan uga shaqeyn lahayn midnimada, wadajirka iyo walaaltinimada ummadda Soomaaliyeed oo ku soo daashay dagaal iyo colaad aan dhammaad lahayn, dhaxalkeeduna noqday burbur iyo barakac.
Annaga oo haddaba taas ka duulayna waxaan taageeraynaa dadaallada nabadeed ka socda dalka gudihiisa, waxaana xoojinaynaa sidii ay ku mira dhali lahaayeen dadaalladaas. Baaqa aan u jeedinayno ummadda Soomaaliyeed waxay tahay inay gacmaha is wada qabsadaan oo ay meel iska dhigaan khilaafka iyo tafaraaruqa dhexdooda ka jira.
Waxaan ka codsanayaa bulshada caalamka guud ahaan, gaar ahaan dowladaha daneeya arrimaha Soomaaliya inaysan ka jeesan Soomaaliya oo ay sii wadaan, siina labanlaabaan taageerada farsamo ee ay u fidinayaan ummadda Soomaaliyeed. Waxaan si gaar ah ugu mahad-naqayaa Qaramada Midoobay, dowladda Mareykanka iyo dowladda Ingiriiska,dowladdda Turkiga iyo dowladaha kale ee daneeya arrimaha Soomaaliya dadaalka iyo juhdiga ay ku bixiyeen geeddi-socodka dib u heshiisiinta ee Soomaalida dhexdeeda.Waxaan ku baraarujinayaa inaysan ka caajisin dadaalkooda.
Intaasi kadib waxaa iyaguna goobta shirka ka hadlay masuuliyiin ka socotay maamul goboledka Azania State of Somaliya oo iyaguna dhiiragelieyy dadalada nabeed ee ay hormuudka u tahay maamulka Puntland.
Ugu danbeyn waxaa madasha shirka lagu soo dhaweeyey madaxweynah Puntland Cabdiraxman Faroole oo ka hadlay arimo dhawr ah waxuuna mahadcelin iyo salan uu u jediyey intii soo qaban qaabisay xaflada kadib sheegay iney mamulkiisa soo dhaweynayan maamul goboleedyada xitaa hadii ay shacab ku nool tuulo sameystan ujeedadooduan tahay sidii wadanka looga hirgelin lahaa nidaamka federalisimka.